Author Topic: Jharana Thapa - photos and profile (Read 110935 times)
« Reply #10 on: August 20, 2009, 04:49:49 AM »
« Reply #11 on: August 20, 2009, 04:55:32 AM »
दीपेन्द्र लामा- स्विमिङपुलको पानी छोयो भने उनलाई एलर्जी भइहाल्दोरहेछ। त्यसैले जतिसुकै गर्मी किन नहोस् उनी सहरमा पौडी खेल्दिनन्। तैपनि कलाकार परिन् निर्देशकले अह्राएपछि कहाँ पन्छिन पाइन्छ र! भर्खरै 'तिमी मात्र तिमी'को सुटिङ गर्दा उनले स्विमिङ पुलमा डुबुल्की लगाइहालिन्। र, सधैंझैं ढाडमा फोको उमारिन्।
तर यति हुँदा पनि हिरोइन झरना थापा स्विमिङपुलको पानीप्रति रिस पोख्दिनन्। भन्छिन् 'मलाई नफापेको पानी होइन केमिकल हो।' हुन पनि उनलाई अरु प्राकृतिक जलासयले अहिलेसम्म कुनै अप्ठ्यारो पारेको छैन।
स्विमिङपुलको एलर्जीले गर्दा उनी पानीको स्वच्छताप्रति निकै सजग छिन्। स्वच्छ पानी र सरसफाइलाई समेत मानवअधिकार मान्नुपर्ने जिकिर उनको छ। सरसफाइमा सरकारले पाँच करोड मात्र बजेट दिएको उनलाई चित्त बुझेको छैन। 'वाटरएड'नामक संस्थाले उनलाई 'सरसफाइ दूत' बनाएपछि उनी पानी र सरसफाइबारे बढी सचेत हुन थालेकी हुन्।
खानेपानीको अभाव उनले पनि खेपेकी छिन्। तर 'पानी दूतु भएपछि उनले पानीसम्बन्धी चिन्ताको दायरालाई फराकिलो पारेकी छिन्। काठमाडौंका धारामा हप्ताको एक वा दुईचोटि मात्र पानी आउने र त्यो पनि आधा रातमा भर्नुपर्ने कठिनाइलाई अरुको समस्या भनेर निश्चिन्त हुन उनलाई अब सुहाउँदैन्। त्यसैले उनी विभिन्न जमघटमा खानेपानीको बन्दोबस्त प्रभावकारी हुनुपर्ने माग उठाइरहन्छिन्।
उनको फिल्मदुनियाँमा पनि स्वच्छ पानीको पूरा ग्यारेन्टी छैन। सुटिङमा निर्माताहरुले मन कुँडाईकुँडाई 'मिनरल वाटर'को बन्दोबस्त त गरिदिन्छन् तर सिर्फ हिरोहिरोइनलाई। समस्या पिउने पानीको मात्र होइन। पानीकै अभावले गर्दा बढेको लोडसेडिङले फिल्म सुटिङलाई बिथोलेको छ।
सुटिङ गर्न विभिन्न ठाउँमा पुग्ने झरना पानीका मुहान देख्यो भने मन थाम्न सक्दिनन्। चाखिहाल्छिन्। उनले थुप्रै मुहान झरना र कुवाका पानी चाखेकी छिन्। विज्ञानले पानीको स्वाद हुँदैन भन्छ। तर झरना दावी गर्छिन् 'पानीको स्वाद ठाउँपिच्छे फरक हुन्छ।'
हिरोइनले झरनामा नुहाएको दृश्यलाई नेपाली फिल्मका धेरैजसो निर्देशक एउटा मीठो कल्पना मान्छन् र यो मीठो कल्पनालाई साकार पारिदिन नेपाली हिरोइनलाई कुनै आपत्ति छैन। झरना स्वयंले पनि थुप्रै झरनामा नुहाइसकेकी छिन्। अहिले काठमाडौंमा चलिरहेको 'तकदीर'मा समेत उनलाई झरनामा नाच्दै गरेको हेर्न पाइन्छ।
हिरोइनलाई बिनाकारण झरनामा चोपलिदिएको आरोप निर्देशकहरुलाई बेलाबेलामा लाग्नेगर्छ । झरना भने यसलाई नकारात्मक मान्दिनन् । त्यस्तो दृश्यमा हिरोइन र झरना दुवैको सौन्दर्य मिसिने हुनाले दर्शकको मनमा आनन्द पैदा हुन्छ भन्ने लाग्छ उनलाई ।
मानवशरीरमा ६० प्रतिशत अंश पानी हुने भएकोले झरना पनि पानीसँग हुरुक्क हुनु कुनै नौलो होइन । तैपनि उनी अधिक पानी पिउने व्यक्तिमा पर्छिन् । 'एकदम थोरै पानी पिउने मान्छे पनि हुन्छन्'- उनी अनुभव सुनाउँछिन् 'मलाई चाहिँ पानीको मात्रा पुगेन भने छटपटी भइहाल्छ।'
उनले प्यास मेटाउन मात्र पानी पिएकी होइनन्। पानीलाई सौन्दर्यसँग जोड्छिन् । पानी धेरै पिइयो भने विभिन्न रोगबाट मुक्त हुने त छँदैछ त्यसबाहेक अनुहारको चमकमा समेत पानीको चमत्कार देख्छिन् उनी।
उनलाई सबभन्दा मनपर्ने पेयपदार्थ पानी हो भने ऋतु चाहिँ वर्षा। झरीमा रुभुन पाए उनलाई भोक लाग्दैन। फिल्ममा कृत्रिम झरी बनाएर सुटिङ गरिन्छ। त्यस्तो झरी भने उनलाई मनपर्दैन । तर साँच्चैको झरीले फिल्मको सुटिङ रोकिन्छ । यो पक्ष चाहिँ उनलाई नरमाइलो लाग्छ ।
उनको नाम उनकी आमाले जुराइदिएकी हुन्। नामसँग आपुनो बानीव्यवहार मिल्छ कि मिल्दैन उनले त्यति गम्भीर भएर सोचेकी छैनन्। तैपनि कताकता मेल खान्छ कि भन्ने उनलाई लाग्छ। 'झरनाजस्तै म पनि सरल छु तर सजिलो छैन बताउँछिन् उनी। झरनाको उचाइ पानीका अरु स्रोतभन्दा माथि हुन्छ नि ! उनलाई कतिपयले यसो भनेर पनि जिस्काउँछन्। तर उनी पुल्पुलिन चाहदिँनन् 'त्यो त मैले भन्न नसुहाउने कुरा हो।'
बरु पानीको गुण उनमा खोज्न सकिन्छ। पानी जति ठक्कर खाँदै बग्छ उति शुद्ध बन्छ। उनी आफ्नो फिल्मयात्रालाई यही पानीको बहावसँग तुलना गर्छिन्। 'मैले निकै हन्डर खाएको छ' तर हार खाइनु उनी बग्दछिन् 'जतिजति फिल्म खेलेँ उतिउति ममा निखार आइरहेको छ।'
पानीले नुन होस् वा चिनी दुवैलाई घोलिदिनसक्छ। झरना व्यवहारमा यस्तै छिन्। साथीभाइमाझ उनको शीतलता अपरिचित छैन । जस्तोसुकै मान्छेसित घुलमिल हुनसक्ने बानी उनको छ।
नाम सौन्दर्य र पानीप्रतिको लगावले गर्दा झरनालाई जलपरी भन्न मिल्ने हो तर उनी भने आफू जलपरी नभएको प्रष्ट पार्छिन्। उनले सुने अनुसार जलपरीको शरीर आधा मान्छे र आधा माछाको हुन्छ र त्यो इच्छाधारी हुन्छे। कहिले मान्छे बन्छे त कहिले माछा। पेशाले झरना पनि इच्छाधारी हुन्। उनले फिल्ममा विभिन्न रुप धारण गरेकी छिन् र अझ कति अवतार धारण गर्नेहुन् हेर्न बाँकी छ। साथै उनलाई कृत्रिम जलासय नफाप्नु र उनले सपनामा पटकपटक माछा देख्नु रहस्यमय छ। उनले नस्वीकारे पनि कतै उनी जलपरी त होइनन् !
source - http://www.nagariknews.com/ent/movies/819-2009-05-08-07-58-30.html
« Reply #12 on: October 20, 2009, 04:16:11 AM »
चलचित्र 'राज्य' को एक दृश्यमा हिमालको काखमा सुत्दै नायिका झरना थापा ।
« Reply #13 on: October 27, 2009, 03:05:03 AM »
« Reply #14 on: October 30, 2009, 02:55:00 AM »
"केटी हराएको सूचना"बनाउंदैछिन झरना
दुईवटा फिल्मको सुटिङ अनि आफैंले निर्माण गरेको "तक्दिर" काठमाडौंमा चलाउने अन्तिम तयारी । त्यसमाथि म्युजिक भिडियोहरूको खात । नायिका झरना थापालाई यतिखेर "असार १५" लागेको छ । "माघ अन्तिमबाट "तक्दिर" काठमाडौंमा प्रदर्शन हुन्छ"- म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि चितवन सौरहा गएकी झरनाले शनिबार फोनमा भनिन्- "तत्कालै कालापानी र एउटा भोजपुरी फिल्ममा अभिनय गर्दैछु । त्यसबाहेक अरू दुईवटा फिल्मबाट प्रस्ताव आएको छ, तर समय मिलाउने गाह्रो भइरहेको छ ।"
उपत्यकाबाहिर राम्रै चलेर राजधानीमा प्रदर्शन हुन लागेको "तक्दिर"ले केहीअघि सर्वोत्कृष्ट फिल्म, नायिका, स्क्रिप्ट, चरित्र अभिनेता र निर्देशक गरी पाँच विधामा केटिभी फिल्म अवार्ड जितेको थियो । यो सफलताले हौसिएकी झरना भन्छिन्- "वैशाखबाट अर्को फिल्म निर्माण गर्छु ।"
आगामी फिल्मको नामचाहिँ अलि अनौठो छ- केटी हराएको सूचना । "यो एकदमै नौलो फिल्म हुनेछ"- झरना भन्छिन्- "केन्द्रीय चरित्र त्यो हराउने केटीको रोल म आफैं गर्छु होला । तर, अरू नायिकालाई पनि लिन नसकिने भन्ने होइन ।"
आफू निर्माता भएपछि "लिड रोल"आफैंले गर्न पाउनुपर्छ भन्नेचाहिँ नसोचेको झरनाले बताइन् । "मुख्य कुरा कथामा को फिट हुन्छ भन्ने हो"- उनले भनिन्- "म फिट भएँ भने मै खेल्छु, नत्र फिट हुने हिरोइन खोज्नुपर्छ ।" अभिनयका साथै निर्माता पति सुनिलकुमार थापासँग निर्माणमा व्यस्त झरनाले पछिल्लोपटक "म तिमीविना मरिहाल्छु" मा गरेको अभिनय निकै मन पराइएको थियो । तर, झरना "यतिमै सन्तुष्ट नभएको" दाबी गर्दै भन्छिन्- "मैले अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।"
« Reply #15 on: November 02, 2009, 12:49:39 PM »
रजतपटमा फेरी अर्को स्क्याण्डल
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०६६ कार्त्तिक १६, सोमवार
नेपाली रजतपटमा बेलाबेलामा बिभिन्न किसिमका स्क्याण्डलहरू भईनै रहन्छन् । गएराति नयाँ बानेश्वर स्थित सडकमा पुन: एउटा स्क्याण्डल मच्चियो । नायिका झरना थापाले जब आफ्नै रेष्टुरेण्ट अगाडीको सडकमा आफ्नै श्रीमान सुनिल कुमार थापालाई नायिका रेजिना उप्रेतीसँग भेटिन, त्यसपछि त्यहाँ शुरू भयो एउटा अर्को हंगामा ।
जब नायिका झरना सुटिङ सकेर रातको १० बजे घर फर्किन तब उनले घरमा आफ्ना श्रीमानलाई भेटिनन् । रातको समयमा आफ्ना श्रीमानलाई घरमा नदेखेपछी उनले श्रीमानको मोबाईलमा फोन लगाईन तर सम्पर्क हुनसकेन । निकै बेरसम्म फोनलगाए पछी बल्ल बल्ल फोन लाग्यो । कुरा पनि भयो । उनले घर कतिबेला आउने भनेर पनि सोधिन् र श्रीमानले जवाफ फर्काए - 'म एक छिनमा आउँछु ।'
कछिनमा आउछु भनेका सुनिल रातको १ बजेसम्म पनि नआउँदा झरनालाई छटपटी भयो । १ बजेसम्म श्रीमान र फोन केही नआउँदा नायिका झरनालाई केहि शंका उत्पन्न पनि नभएको हैन । बेलाबेलामा उनले घरको झ्यालबाट नचिहाएको पनि हैन । रातको करिब २ बजेतिर आफ्नै घरको झ्यालबाट हेर्ने क्रममा नायिका झरनाले आफ्ना श्रीमानको रातो गाडी सडकको छेउमा देखिन । मध्यरातमा सडकको छेउमा बसेर श्रीमान के गरिरहेका छन् त भनेर उनले अली राम्रो सँग झ्यालबाट चिह्याएर हेरिन् । त्यसपछी उनले त्यहाँ आफ्ना श्रीमानको साथमा एउटी केटीलाई देखिन । नायिका झरना आगो भईन् र उत्तिनैखेर उनी त्यहाँ पुगिन ।
जब नायिका झरनाले रातको करिब २ बजेतिर आफ्ना श्रीमानसँग नायिका रेजीनालाई देखिन अनि उनले रिस खप्न नसकेर त्यहिँनै रेजिनालाई झापड हानिन् । त्यसपछी घटनास्थलमा खैलाबैला मच्चियो । झरनाले केहि पत्रकार र पुलिसलाई न्यायको लागी डाकिन । घटनास्थलमा पुलिस पनि आए र केहि पत्रकार पनि । केहिबेर हल्लाखल्ला मच्चिए पनि नायिका रेजिना चुपलागेर आफ्नो घर तर्फ प्रस्थान गरिन् भने पुलिस र पत्रकारहरू पनि आफ्नो बिबरण लिएर फर्किए । न्याए नपाएकी झरना श्रीमानको साथमा केहि नबोली आफ्नो घर तर्फ प्रस्थान गरिन् । तर उनलाई रातभर निन्द्रा परेन । यो घटना पछी झरना घरमा बस्न सकिनन् र अहिले माईतिघरमा शरण लिन पुगेकी छिन् ।
आज बिहान घटनाको बारेमा फिल्मीखबरले बुझ्ने प्रयास गर्दा झरनाले यसरी बेलीबिस्तार लगाएकी थिईन । फिल्मीखबरले नायिका रेजिना र सुनिलसँग पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको थियो तर दुबैको मोबाईलमा सम्पर्क हुन सकेन । नायिका झरनाले यो घटना नौलो नरहेको बताईन्। उनले भनिन् - 'आज भन्दा करिब डेढबर्ष देखि यी दुईको चर्तिकाला हेर्दै आएकी छु र बेला बेलामा यि दुईलाई सँगै पनि भेटेकी छु ।' महिला भएर केहि गर्न नसकेको गुनासो पोख्दै झरना थप्छिन् - 'यो भन्दा केहि समय अगाडी यी दुईलाई सँगै भेटेपछी माफी माग्न पनि लगाएकी थिएँ तर आज फेरी त्यही घटना दोहोरीदैं छ ।' आफूलाई दिदी भनेर सम्मान गर्नेले आज आएर आफ्नै घर बिगार्न खोजेको उनले बताईन् ।
« Reply #16 on: November 15, 2009, 02:33:14 PM »
झरना थापा, अभिनेत्री-
म सिरियल धेरै हेर्छु। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ...तीतो सत्य' एकदम मनपर्छ। हिन्दी सिरियल ...बालिका वधु' र 'झाँसी की रानी' भ्याएसम्म हेर्छु। सिरियलपछि मेरो रुचि फिल्मी कार्यक्रममा छ। स्वदेशी विदेशी जहाँको भएपनि यस्ता कार्यक्रममा रिमोट अडिन्छ। नेपाली फिल्म सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमको प्रसारण तालिका याद छ मलाई।
जगदीश घिमिरेको 'अन्तर्मनको यात्रा'। यसको नयाँ संस्करण आएको सुनेकी छु। बजारमा धेरै चर्चा छ। त्यसैले यो किताबबारे मेरो कौतुहलता बढेको हो।
पोखरा भन्छु। यो यस्तो ठाउँ हो, जहाँबाट हिमाल, पहाड र तलाउ एकसाथ हेर्न सकिन्छ। यहाँ खाने कुरा राम्रो पाइन्छ। बस्ने होटल पनि विभिन्न 'रेन्ज'का छन्। यहाँको अतिथिसत्कार राम्रो छ। त्यसैले पोखरा धेरै हिसाबले घुम्नका लागि उपयुक्त स्थान हो।
पौडी र स्किपिङ (डोरी)मा कुन बढी खेलियो भन्न सक्दिनँ। मैले बाल्यकालदेखि नै दुवै खेल खेल्दै आएकी छु। शरीर फिट राख्न दुवै उपयोगी छन्।
तातो दालभात र माछा एकदमै मनपर्छ। पाएसम्म खोलाको माछा नभए पालेकै भए पनि हुन्छ। फुर्सद भएसम्म आफैं पकाउँछु। मैले यो परिकार बनाउँदा घरका सबैले प्रशंसा गर्छन्।
अहिले म पारिवारिक टेन्सनमा छु। मान्छेले दुःख दिए। यस्तो बेला कस्तो गीत सुन्ने खोइ? रक टाइपको गीत सुन्दा अलि फ्रेस भइन्छजस्तो लाग्छ।
कफी र तातो पानी।
'फिल्मीखबरडटकम' बढी हेर्छु। यसमा फिल्मका गतिविधि धेरै हुने भएकोले मलाई मन परेको हो।
सुटिङमै धेरै समय बित्ने भएकोले धेरैजसो अरूकै 'च्वाइस'मा देखिनुपर्छ। तर, मलाई मन पर्ने चाहिँ सेतो र कालो रङको कपडा हो। सेतोमा एकदमै 'कुल' लाग्छ। कालोमा 'बोल्ड' महसुस गर्छु।
अहिलेको अवस्था हेर्दा त भैंसेपाटी र बूढानीलकण्ठ ठीक हो। दुवै एरिया शान्त र सुविधा सम्पन्न छन्। प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्न पनि उपयुक्त छ। त्यसैले बस्नलाई काठमाडौकों भीडभाडभन्दा अलि परको ठाउँ नै मनपर्छ।
काठमाडौंको ट्राफिक जाम देख्दा त मोटरबाइक नै ठीक लाग्छ। तर, धुलो र धुवाँको समस्याले गर्दा गाडी चढ्ने गरेको छु। होन्डाईको एसियन गाडी चढ्छु।
यस्तै भन्ने छैन। मुड अनुसार कहिले दिनभर सुत्छु। कहिले फिल्म हेरेर बित्छ। घुम्न चाहिँ त्यति जान्न।
« Reply #17 on: November 27, 2009, 06:53:13 AM »
मुम्बईको कोठीमा झरना
काठमाडौं, २०६६ मंसिर ११ - भारत मुम्बईको एउटा वेस्यालय, जहाँ बेचिएर पुगेकी एक युवती छटपटाइरहेकी छन् । यौन पिपासुहरूको अनेक पशुजन्य व्यवहारको उनले पलपल सामना गर्नुपर्छ । संघर्षमा रगतपच्छे उनी बेहोसीमै भित्तामा लेख्छिन्, 'नेपाल आमा...।'
नायिका झरना थापा मंगलबार विश्वज्योति हलको पर्दामा तिनै युवतीको भूमिकामा थिइन् । उनकै मुख्य अभिनय रहेको नेपाली फिचर फिल्म 'कहाँ छौ कहाँ' लाई सञ्चारिका समूहले च्यारिटी शो गरेको थियो, दर्शकलाई चेलिबेटी बेचबिखनको कथाले भावुक बनायो । दयाराम दाहाल निर्देशित फिल्ममा अशिक्षा र गरिबीको कारण बेचिएका चेलीको कथालाई निकै मार्मिक रूपमा देखाइएको
छ । वेस्यालयमा भोग्नुपर्ने पासविक यातना, यौनपिपासुहरूको दुव्र्यवहारदेखि उद्धारसम्म । 'हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा सोझी युवतीहरू बेचिएका छन्,' शोपछि भेटिएका निर्माता गोविन्द शाहीले भने, 'नेपाली फिल्मका दर्शकले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यही भएर बेचिएको चेलीको समवेदनालाई पर्दामा उतार्‍यौं ।'
फिल्ममा झरनासँगै विराट भट्ट र गोविन्द शाही स्वयंको पनि अभिनय छ । झरनाले निकै भिन्न र साहसिक अभिनय गरेकी छन् । विराज र गोविन्दकै 'मिसन' का कारण कोठीबाट चेलिबेटीको उद्धार हुन्छ । फिल्मको अन्तिममा सकारात्मक सन्देश र चेतना घुसाइएको छ । 'लामो मिहिनेतपछि मुम्बईको सेट भारतको रुपेडियामा तयार पारिएको हो,' शुक्रबारदेखि राजधानीका विभिन्न हलहरूमा लाग्ने फिल्मबारे गोविन्दले भने, 'कम्तीमा पनि चल्तीको फिल्म रुचाउने दर्शकले बेचिएको चेलीको पीडा र संवेदना मनन गर्ने हो भने यसले सकारात्मक सन्देश विस्तार गर्नेछ ।'
हालै वुमन्सफेयरले नेपालबाट बर्सेनि झन्डै एक हजारको हाराहारीमा भारतका विभिन्न सहरमा चेलिबेटी बेचबिखन हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो, जसमध्ये मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, चितवन र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईका विभिन्न जिल्लाहरूका युवतीहरू बढी छन् । त्यसरी बेचिएर चेलीहरू भारतको कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरसम्म पुग्छन् । 'मेरै गाउँठाउँको कथा पनि फिल्ममा छ,' नेपालगन्जका गोविन्दले भने, 'बेचिएका चेलीहरू कि त उतै मरेका छन्, कि त एड्स बोकेर फर्केका छन् ।' १५ वर्षअघि चेलिबेटी बेचबिखनमै केन्दि्रत रहेर रवि बरालले 'चमेली' बनाएका थिए ।
« Reply #18 on: November 27, 2009, 02:46:23 PM »
« Reply #19 on: January 14, 2010, 07:10:05 AM »